Ngaphambi kokwenza umshini wokushisa ngezintambo ekhaya, kubalulekile ukuqonda izingxenye eziyinhloko nemigomo yomsebenzi. Ukubaluleka okubaluleke kakhulu kunikezwa emandleni omthamo, okuxhomeke kulohlobo lomsebenzi ozayo. Ukuxhuma imikhiqizo emincane yensimbi idinga amanje aphansi, ngenkathi ukuxhuma kokuqiniswa okukhulu akunakwenzeka kulokhu kuqina.
Le divayisi inikeza i-arc kusuka kumatheni wamandla. Lesi sici siqukethe izingxenye ezimbili eziyinhloko:
Ukwakhiwa kwe-transformer akuyona inkinga kakhulu. Ukuqhutshwa okuyisisekelo kwedivaysi kuxhunywe emajondolo ku-220 W, kuyilapho lesi sigaba sesibili sidinga umsebenzi wokweseka. I-magnetic wire ingahlanganiswa hhayi kuphela kumacwecwe e-transformer metal ekhethekile, kodwa nakwezinye izinto. Njengengxenye yokwengeza ukuthuthukisa izici ze-arc, kusetshenziswa amadivaysi akhethekile ahlinzekela ukulungiswa kwamandla we-voltage. Izengezo ezinjalo zivame ukutholakala kumadivayisi asebenzayo.
Kuye ngamandla wamanje, amandla e-transformer akhethiwe. Kumele kuqashelwe ukuthi amavolumu eminqamuli yokukhiqiza inquma intuthuko yenqubo yokuhlunga, okungaba nzima noma okulula. Lokhu kufanele futhi kucatshangelwe ngaphambi kokwenza umshini wokushisa ngezinsimbi zokudonsa .
Uma ukhetha umthombo we-voltage, kubalulekile ukubuyisela izici zamanje ezifunayo. Inketho engcono kakhulu kuyoba imithombo enezindawo eziwela phansi kakhulu futhi ngokuzithoba. Benza kube lula ukwenza inqubo yokuhlunga futhi banikeze ukushintsha kwe-arc okungenani.
Ngokuzimela, ungenza umshini wokushisa ngezintambo zanoma yiluphi uhlobo, kungakhathaliseki ukuthi luzenzakalelayo, inverter, olusebenzayo okwamanje noma okunye okukhona. Uma kungenakwenzeka ekufezeni lo msebenzi, kubalulekile ukuhlala edivayisini eguquguqukayo elula. Idivaysi enjalo isebenza ekushintsheni okwamanje futhi ivumela ukufeza umshini okhishiwe okhwalithi. Ikulungele kahle izintambo ze-welding ekhaya. Ngaphambi kokuba uqale ukwenza, udinga ukulungisa okulandelayo:
Izinto ezingumgogodla we-transformer ngezinga eliphezulu lokufaneleka komonakalo;
Inethiwekhi yethusi elanele.
Ingqikithi kumele ibe nokuhlelwa okujwayelekile okufana no-U nesakhiwo senduku. Kwezinye izimo kuyadingeka ukusebenzisa izinhlamvu zomunye umumo (isibonelo, nxazonke), lokhu akuguquki izici zedivayisi, kepha kuyancipha ukuqhutshwa kwe-wiring. Ngomsebenzi wendlu, indawo engaphansi kwesigcawu kufanele ibe ngaphakathi kuka-50 cm². Ukusetshenziswa kwesigaba esikhulu esiphambeneyo akunakwenzeka, ngoba akunikezi izici ezengeziwe futhi kwandisa isisindo esiphelele sedivayisi.
Ukuze kusetshenziswe ngokuyinhloko, i-wiring yocingo isetshenziswa, ekhonjiswe izinga eliphakeme lokumelana nemiphumela yokushisa. Kufanele ifakwe nge-glass-fiber noma ukukhishwa kwekotini. Kungenzeka ukuthi usebenzise izintambo ezinezingxenyeni ezivuthayo zenjoloba nezinye izinto, ngaphandle kwe-PVC.
Uma kunesidingo, ukugxila kungenziwa ngesandla ngosizo lwezingcezu ezincane ezifanelekayo. Zilonda ngethusi yethusi futhi zimbozwe ngendwangu yokugcoba kagesi.
Uhlaka lwamakhoyili lwenziwa ngokuhambisana nezici ze-geometri zesifunda magnetic. Kumele babe nezilinganiso ezifanele ukuze bangaphazamisi ukubekwa kwamahhala wesifunda somgogodla ongokoqobo. Ukuze kwenziwe okwakamuva, njengomthetho, amakhadibhodi avamile noma i-textolite isetshenziswa.
Uma uhambisa ama-coils, kubalulekile ukucabangela ezinye izici. Ngokuyinhloko, ukuqhuma okuyinhloko kwenziwa kuphela isigamu, phezulu kuso kufakwe ingxenye yesibili. Ngakolunye uhlangothi lwekhoyili lihlanganiswe ngendlela efanayo. Ngosizo lwephepha elimnyama, i-fiberglass kanye nekhadibhodi, kungenzeka ukwandisa izindawo zokuqapha, ngoba lokhu kuyadingeka ukubeka izingcezu zezinto ezikhethiwe phakathi kwezingxenye zokumisa.
Umshini wokushisa wezingcingo zethusi udinga ukulungiswa, okuhlanganisa ukuxhuma idivayisi kwinethiwekhi nokulinganisa idatha yevolumu ekuqhumeni kokubili. Izinkomba kufanele zibe ngaphansi kuka-60 V. Uma kudingeka, ungangezela ingxenye yokumisa noma ukhiphe ngokweqile. Izindlela kanye nezinguquko ekuqhumeni kwenziwa kuze kutholakale idatha edingekayo.
Umshini wokushisa wezintambo uxhumeke kwinethiwekhi ngokusebenzisa ikhebula lamatafula amabili noma i-gasket yangaphakathi exhuma ekuqhumeni okuyinhloko. Isinyathelo sokugcina ukuxhuma kwezingcingo ze-PGG kuma-terminal we-winding yesibili. Kufanele kuqaphele ukuthi lezi zintambo zilungisa phansi izingodo ze-welding bese zixhuma ngezinto ezicutshungulwayo.
Ukusebenza ngezingcingo zethusi
Emisebenzini kagesi izinsimbi zethusi ziyadingeka. Kunezindlela ezintathu zokuxhuma eziyinhloko: ukwelusa, ukugubha kanye nokwehliswa. Inhlanganisela enhle yejubane nekhwalithi yomsebenzi yindlela yokuqala.
Ukunakekela kufanele kuthathwe uma usebenza ngethusi bese ucabangela izici zalesi sici. Kungenzeka ukuthi i-breakage nayo ifakwe kancane kancane, naphezu kokuthi iphuzu layo lokuqhakazila lidlula amazinga angu-1000. Imisebenzi yokwesekwa ingenziwa nge-direct and alternating yamanje. Uma kudingekile, indlela yokukhwelisa i-arc kanye nezinsiza ezengeziwe ezifana ne-transformer, idivayisi yesigcawu kanye ne-inverter ingasetshenziswa.
Umshini wokushisa wezingcingo ze-welding ingaba yiklamo ehlukene futhi yenziwe ngokusho kobuchwepheshe abathile, naphezu kwalokhu, inqubo yokuhlunga iqukethe izinyathelo ezifanayo. Okokuqala, umgogodla ususwe emaceleni usebenzisa isisindo noma ummese wokubhala ovamile. Kuyadingeka ukuba usuke enqenqemeni ka-2-3 cm, ugobe igobolondo elingenhla bese uyisusa ngomusa. Ukuguqulwa kwezingcingo kufanele kube nobude obungaba ngu-3 cm bese kuhlanganiswa ngezingqimba eziningana zesayizi elijwayelekile. I-clamp ihlelwe kuphela ekuxhumaneni okuphelile. Okulandelayo, udinga ukuxhuma umshini wokushisa wokufakelwa izinsimbi zethusi ngamandla afakiwe kanye nokufakwa kwamandla.
Inqubo yokudonsa ngokwayo ithatha imizuzwana embalwa futhi inikeza ibhola elincane yethusi. Kumele kuqashelwe ukuthi isikhathi sokulondoloza sibaluleke kakhulu, ngoba uma umshini ususwe maduzane, ikhwalithi yokuxhumeka izoba ephansi ngenxa yesakhiwo esiyingozi. Kule nkinga, uma usuqeda imizuzwana embalwa, kufanele uqale futhi, kusukela ekupheleni kwezintambo. Ngemuva kokuxhuma nokupholisa izakhi, kubalulekile ukwenza ukuxhuma bese uxhuma umthamo.
Ukucabangela ukuthi umshini wokushisa uxhunywe kwinethiwekhi ngezingcingo zethusi, ukhetho lwabo alubalulekile nakancane. Kufanele banikeze umsebenzi ngaphansi kwamazinga ahlukene e-voltage nasezimo ezahlukene. Okubaluleke nakakhulu yizici ezilandelayo:
Ukuphikiswa ukuguqa nezinye izithonya zemishini;
Ukulondolozwa kwezici lapho kuvezwe imisebe ye-ultraviolet;
Ukusetshenziswa kokusebenzisa ebangeni lokushisa elikhulu;
Ukuphikisa ukubunjwa nokubola.
Idivayisi kusuka ezingxenyeni ze-microwave
Umshini wokushisa olula wezinsimbi zethusi ngezandla zabo siqu ungenziwa kusuka ku-transformer kusuka kuhhavini le-microwave elinamandla aphezulu nobukhulu obuhlanganisiwe. Idivaysi efanayo ifakwa ezindlini ezivela kumandla kagesi ePC futhi ifaneleke ngokufanele ukuxhuma izintambo zethusi.
Ukwakha idivayisi, i-transformer kusuka kunoma iyiphi i-oven microwave iyafaneleka. Kumele ukuba ihlakazeke ngaphambilini, lokhu kungenziwa ngokusika izinhlangothi usebenzisa isiBulgaria. Kubalulekile ukuphawula ukuthi uxhumano lwe-transformer enethiwekhi lungenzeka kuphela emva kokususa ukukhishwa kwesibili.
Kudingekile ukuba uqhubekele ukuqhuma kwesibili esikhundleni sokudala futhi ubeke uphawu oluyisisekelo nge-epoxy compound. Khona-ke kusale ukufaka i-transformer ezindlini kusukela ku-unit supply unit kanye nama-automata amabili.
Umshini wokwamukela umshini wocingo unikeza ukushisa okusheshayo kwe-arc nokusetshenzwa kwekhwalithi yezintambo. I-transformer ayishintshi ngesikhathi sokusebenza, kepha uma usebenzisa idivayisi enkulu, kunconywa ukuthi usebenzise umqhubi we-10 mm² ukuqhuma. Naphezu kokuthi i-transformer isisindo esivelele, idivayisi ngokwayo inamanani amancane.
Nciphisa ukusetshenziswa futhi uthuthukise ikhwalithi yokuxhumeka ngokusebenzisa inkinobho esesibambini se-terminal ye-graphite. Ngale ndlela kuyokwenzeka ukuvula umshini ngemuva kokuthi ukuguqulwa kusethwe endaweni efunayo.
Umshini wokushisa ngezintambo ngezandla zakhe: izici
Ukwehliswa okuncane kutholakala ngokusebenzisa i-throttle. Kumele kuqashelwe ukuthi uma usebenza nge-twists ye-copper, kukhona iphunga elimnandi lemfucumfucu nomusi, ngakho-ke kunconywa ukuthi uvule iwindi kuqala. Amacala okushisa i-graphite electrode nawo ajwayelekile.
Izintambo kufanele zibe nobude obufanayo. Kuzosiza futhi ukumboza i-twist brown ngaphambi kokushisa bese ubona isikhathi esincane sokushisa.
Isibulali esihle singatholakala ezintweni ezifakiwe noma izingxenye ezithengiwe ngenani elingokomfanekiso. Ngalolu daba, ibhulashi elivela ku-trolley bus noma imoto enamandla iphelele. E-graphite, izimbobo eziningana zamasayizi afanele afakwe. Ziyadingeka ukubeka i-twist nokuthola i-alloy ngisho.
I-arc ngesikhathi sokusebenza kufanele iqhubeke futhi ibe nokushisa okwanele ukuqinisekisa ukuxhumana okuhle. Njengoba kuphawuliwe ekuqaleni, Ukufudumala kokushisa ngaphansi kwezinga elidingekayo kuholela ekubunjweni komgogodla okhuni ngaphakathi kwe-droplet efriziwe.
Iziphuzo zeziphuzo ze-broilers ngokwabo. Ungayenza kanjani isitsha sokuphuza izinkukhu ze-broiler? Iziphakeli kanye nezitsha zokuphuza ama-broilers (izithombe)
Isitayela waseGibhithe elingaphakathi: umbala ekamelweni, oFaro baseGibithe futhi yokubhala ezindongeni lwamaphethini waseGibhithe